महात्मा गौतम बुद्ध आफ्ना शिष्यहरु साथमा लिएर ज्ञान,उपदेश प्रदान गर्नको निम्ति गाउँ गाउँ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ प्रवचन गर्न जानु हुन्थ्यो । एक समयको कुरा हो महात्मा बुद्ध आफ्नो शिष्य आनन्द स्वास्मीलाई लिएर एउटा गाउँमा जादै हुन्थ्यो । बाटोमा एकजना व्यक्ति बुद्धको नजिक आए र हात जोडेर प्रणाम गरे । उनल् सोधे “मेरो मनमा एउटा प्रश्न उठेको छ । भगवान ! के म सोध्न सक्छु ?” बुद्धले भन्नुभयो सोध, भन्ने संकेतमा टाउको हल्लाउनु भयो । ती व्यक्तिले सोधे “के इश्वर छ ?” बुद्धले झट्ट प्रतिप्रश्न गर्नुभयोे “तिमीलाई के लाग्छ त ? ईश्वर छ होला की छैन होला ?” ती व्यक्तिले भन्यो “मलाई लाग्छ ईश्वर छ ।”
बुद्धले भन्नुभयो “तिमीलाई गलत लागेको छ । यो व्रम्हाण्डमा ईश्वर जस्तो बस्तु केही पनि छैन ।” बुद्धको जवाफ सुनेर त्यो व्यक्ति अकमकियो र बुद्धलाई हेरि रह्यो ।
बुद्ध यति जवाफ दिएर अघि बढ्नुभयो । पछि—पछि दुवै शिष्य पनि अघि बढ्यो । व्यक्ति एकछिनसम्म त्यही उभिएर भगवान जानु भएको बाटो हेरि रहयो ।
बाटोमा जादै गर्दा निकै पर फेरि एकजना व्यक्ति बुद्धको नजिक आयो र हात जोडेर प्रणाम गर्दै सोध्यो । “मेरो मनमा एक प्रश्न छ । भगवान ! के म सोध्न सक्छु ?” बुद्धसँग अनुमति लिएर त्यो व्यक्तिले प्रश्न ग¥यो । “सबै भन्छन ईश्वर छ यसै विषयमा धेरै दिनदेखि म चिन्तनमा छु । के साच्चै नै इश्वर छ ?”
बुद्धले उल्टै त्यही ब्यक्तिलाई नै प्रश्न गर्नुभयो “तिमीलाई के लाग्छ ?” त्यो व्यक्तिले भन्यो “मलाई लाग्छ । इश्वरको सम्बन्धमा जति पनि चर्चा —परिचर्चा गरिन्छ । त्यो सबै मिथ्या हो । इश्वर भन्ने केही पनि छैन । मलाई लाग्छ इश्वर छैन ।” बुद्धले भन्नु भयो “तिम्रो सोच गलत छ । किनकी यस अस्तित्वमा इश्वरभन्दा अरु केही छैन । आखा बन्द गर र मनन गर । तिम्रो अगाडि ,पछाडि ,दाया ,बाया जताततै ईश्वर छ ।”
बुद्धको जवाफ सुनेर त्यो व्यक्ति सोचमा प¥यो । यति जवाफ दिएर बुद्ध आफ्नो बाटो लाग्नुभयो । आनन्द र स्वास्तीव पनि बुद्धको पछि लाग्यो । दुईजना व्यक्तिको एउटै प्रश्नको बुद्धले दिनु भएको बेग्ला—बेग्लै एकदमै विपरीत उत्तर ! दुवै शिष्य अचम्म मानिरहेका थिए ।
अर्को दिनको कुरा हो । भगवान बुद्ध विश्रामको निम्ति गाँउमा नै बास बस्नु भएको थियो । विहानैदेखि गाऊँका व्यक्तिहरु भगवानको दर्शन गर्न र मनमा लागेका जिज्ञासा मेटाउन आउन थाले । भगवान गौतम बुद्ध यसरी गाऊँ— गाँऊ धर्म उपदेश दिन जाँदा गाँऊभरी तथागत बुद्ध आउनु भएको छ भनी हल्ला सुनेर सबैजना दर्शन गर्न ,आशिर्वाद लिन आउने गथ्र्यो ।
त्यहाँ एकजना व्यक्ति आयो । ऊ चिन्तीत देखिन्थ्यो । बुद्धको नजिक आयो र हात जोडेर भन्न लाग्यो “हे बुद्ध ! म एकदमै चिन्तित छु । ईश्वरको सम्बन्धमा सबैको बेग्ला —बेग्लै धारणा छ । कसको कुरा सही मान्नु ? म बडो असमझमा छु । वास्तवमा ईश्वर छ या छैन ! म स्वंयम पनि सही कुरा जान्न ईश्वरको खोजी गरिरहेको छु । भगवान ! मलाई मार्गदर्शन गर्नुप¥यो ।” त्यस व्यक्तिको कुरा सुनेर भगवान बुद्ध चुप लाग्नुभयो । केही पनि जवाफ दिनु भएन र आखा चिम्म गरेर ध्यान मुर्दामा बस्नु भयो ।
यो देखेर बुद्धको शिष्य आनन्द र स्ववास्तीक चकित प¥यो । बुद्धबाट न केही जवाफ न प्रतिकृया नआयपछि त्यो व्यक्ति पनि त्यतीकै मनमा कुरा खेलाउँदै फर्कियो । तब आनन्दले भगवान बुद्धलाई सोध्यो “हे तथागत ! हिजोदेखि आजसम्म तीनजना व्यक्तिले ईश्वरको सम्बन्धमा एउटै प्रश्न ग¥यो । ईश्वर छ या छैन भनेर तर ती तीन जनाले सोधेको एउटै प्रश्नको उत्तर हजूरले एकदमै विपरीत किसिमको जवाफ दिनु भयो । हामी आश्चर्यमा छौ । यो किन भगवान ?” बुद्ध मुस्कुराउनु भयो र भन्नुभयो “पहिलो व्यक्तिको सम्बन्धमा ,उसको मान्यता थियो कि ईश्वर छ ।
उसको ईश्वर छ भन्ने विचार उसले लोकचर्चाबाट सुनेको भरमा इश्वर छ भनरे मानेको अवस्था थियो । त्यसैले म उसको मान्यता मेटाउन चाहन्छु । किनकी कुनै पनि जिज्ञासाको भित्री तहसम्म पुगेर जबसम्म त्यसको सत्यको खोजी हुदैन तबसम्म सही के हो ? भन्ने विषयमा पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुदैन । मान्नु सजिलो छ ,जान्नु गाह«ो छ । म चाहन्छु , मेरो उत्तरले उसको मनमा दुविधा उत्पन्न गरोस र ईश्वर छ या छैन को गहिराईसम्म पुगेर ईश्वरलाई ऊ आफैले खोज्न शुरु गरोस ।” दोस्रो व्यक्तिको मान्यता थियो की ईश्वरको सम्बन्धमा भनिएका सबै कुरा केबल भ्रम हो । मन गढन्ते कुरा हो । ईश्वर कहाँ छ र इश्वर छैन । म, ईश्वर छैन भन्ने उसको सोचलाई पनि तोड्न चाहन्छु ताकी ऊ मेरो उत्तर सुनेर के , साच्ची नै ईश्वर छ त भनेर इश्वरको खोजी भई शुरु गरोस र सही ज्ञान उसलाई प्राप्त होस् ।”
तेस्रो व्यक्तिको सम्बन्ध ऊ स्वयम जाग्रीत अवस्थामा छ । लोक चर्चाको विषयमा ऊ पूर्ण सन्तुष्ट छैन । इश्वर छ या छैन भन्ने सम्बन्धमा सत्य के हो ऊ जान्न चाहन्छ । लोकको इश्वर छ भन्ने पक्षमा पनि ऊ छैन र लोकको ईश्वर छैन भन्ने पक्षमा पनि ऊ छैन । ऊ सत्यको खोजीमा छ ।। उसको यो खोजी उत्तम छ । त्यसैले म उसको खोजीमा वाधा पुराउन चाहन्न । त्यसैले म चूप लागेको हुँ । त्यहाँ मैले बोल्नु उचित थिएन । किनकी त्यहाँ मैले जे बोल्यो उसको विचार त्यसै मोडिन्थ्यो र उसको इश्वरलाई चिन्ने र सही सत्यको पहिचान गर्ने जुन खोजीमा ऊ लागि सकेको छ त्यो रोकिन्थ्यो । जसले गर्दा ऊ इश्वरको सम्बन्धमा ज्ञान पाउनुबाट बन्चीत हुन्थ्यो । र भन्नुमा मात्रै सिमित हुन्थ्यो । ज्ञानमार्गमा यो सर्वदा अनुचित छ ।”
(गुरुङको भगवान् बुद्धका प्रेरणादायक कथाहरू पुस्तकबाट साभार)
प्रकाशित ६ आश्विन २0७७ , मङ्गलबार | 2020-09-22 05:23:31